Iprofayile kaKingtone-Kingtone Jimtom Co., Ltd.
Kingtone yasekwa ngo-2006, ibekwe kwiSiseko soNxibelelwano lweMicrowave yeSicwangciso seTotshi seSizwe eQuanzhou, eChina. Ngumenzi okhokelayo osebenza ngokukhethekileyo kwibala lezixhobo zonxibelelwano lwe-microwave kwaye uzinikele kwi-R&D, ukuvelisa, ukuvelisa, kunye neenkonzo ze-microwave passive kunye nezinto ezisebenzayo, iisoftware zezikhululo zikanomathotholo, ukujonga unxibelelwano kunye neemveliso ze-intanethi.
Iimveliso zethu eziphambili zezi:
I-Walkie Talkie: I-VHF/UHF iphathwa ngesandla okanye i-Mobile Radio;
Iimveliso zoKhuseleko: I-Jammer, i-IMSI Catcher, i-Alarm System; i-Repeater (i-Booster): i-TETRA, i-IDEN, i-CDMA, i-GSM, i-DCS, i-PCS, i-WCDMA, i-LTE;
Siqinisekisa iimveliso ezikumgangatho ophezulu kunye neenkonzo. EKingtone, siyaqhubeka nokulandela ubuchwepheshe kunye neenkonzo ezintsha zokuphumelela.
Siyazamkela izicelo ze-OEM kunye ne-ODM!
Utyalo-mali olunzima lweKingtone kwi-R&D, ukusungula izinto ezintsha, inkqubo yolawulo lomgangatho wokuphumelela iimveliso ezilungileyo kunye nodumo oluhle lophawu. Siye sazuza izatifikethi ezisixhenxe zesoftware ebhalisiweyo yi-State Copyright Bureau kwaye saphumelela i-ISO9001:2008 inkqubo yolawulo lomgangatho. Iimpawu ezine zibhaliswe yi-State Trademark Bureau kwaye siye saqatshelwa njenge "innovative and high technology enterprises" yiFujian Science and Technology Department ngo-2010. Iimveliso zethu zisetyenziswa ngokubanzi kunxibelelwano lweselula, irediyo kunye nomabonwakude, ukhuseleko loluntu, ulawulo lomlilo. , oololiwe, amandla ombane, imigodi nezinye iindawo; ezona mveliso ziphambili ziziphindaphinda ze-GSM, i-CDMA ephindayo, i-CDMA450 ephindayo, i-IDEN ephindayo, i-TETRA ephinda, i-DCS ephindayo, i-PCS ephindayo, i-PHS ephindayo, i-TD-SCDMA iphinda, i-WCDMA iphinda, iphinda i-FDD-LTE, i-TDD-LTE iphinda, i-WiMAX ephindayo, i-MMDS ophindayo, ophinda i-MUDS, ophinda umabonakude wedijithali, iVHF/UHF ephindayo yeDMR/dPMR/TETRA/PDT inkqubo.
I-Kingtone igxininisa kumoya "wokujoliswe ngabantu, iteknoloji kuqala, umanyano kunye nokuzabalazela, ukusungula izinto ezintsha kunye nokuzinikela" kunye nengcamango yomgangatho "womgangatho wegolide wokuphumelela ihlabathi" ukuqhubeka nokubonelela ngeemveliso ezisemgangathweni kunye neenkonzo kubathengi bethu.
Sizimisele ngokunyanisekileyo ukusebenzisana nani. masiphumelele ikamva kunye!